AMBATOMAINTY : Mampihorohoro amin’ny basy kilalao sy midaroka ireo jiolahy
Amin’ny alalan’ny basy kilalao no paikady entin’ilay jiolahy manao ny asa ratsiny teto raha ny angom-baovao voaray avy amin’ny Polisim-pirenena. 13 septembre 2019
Tsy vao izao rahateo koa fa efa fanaony izany na dia efa tratra matetika aza ity farany no sady efa nifonja teny Antanimora, noho io antony io hatrany. Araka ny fanampim-panazavana voaray omaly dia, lehilahy iray no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP8 nohon’ny resaka fanendahana tamin’ny alatsinainy 09 septambra 2019 tokony ho tamin’ny 11 ora alina teny Ambatomainty. Vao iray volana lasa izay no nahatratraran’ny Polisy ity lehilahy iray ity ary rehefa natolotra ny fitsarana dia notazomina vonjy maika teny Antanimora kanefa izao tra-tehaka izao indray.
Tsy niova araka izany ny fomba fanaon’ity lehilahy ity fa mandrahona olona amin’ny alalan’ny basy kilalao hatrany ka alainy avokoa ny zavatra rehetra eny amin’ilay olona ary tsy vitan’izay fa mbola darohany koa ireo robainy. Lehilahy iray no lasibany tamin’ny alatsinainy lasa teo raha hamonjy fodiana teny Ambatomainty, rehefa norahonany tamin’ny basy kilalao dia nalainy ny vola mitentina iray hetsy ariary miampy ny finday.
Mbola afaka niantso vonjy anefa io lehilahy io ka nisy Polisy miasa ao amin’ny CSP8 tsy lavitra teo no nihazakazaka haingana raha vao naheno ny feony. Rehefa raikitra ny fifanenjehana dia tra-tehaka tsy lavitra teo ranamana ary mbola hita teny aminy ny vola sy finday ary basy kilalao iray nangalariny.
Mbola eny amin’ny hopitaly ilay olona nodarohany hatramin’izao manohy ny fitsaboana nohon’ny ratra mafy izay nahazo. Ilay jiolahy kosa efa voatazona sy mbola atao famotorana lalina satria dia efa maro an’isa ihany ireo lasibatra eny amin’ny manodidina an’Ambatomainty iny.